Barcelona oo soo xulatay safka ay kaga hortegyso kooxda Sevilla habeen dambe.
Home Horyaalka Spain Barcelona oo soo xulatay safka ay kaga hortegyso kooxda Sevilla habeen dambe.
Barcelona ayaa soo liiska ciyaartoyda ay kaga hortegeyso kooxda Sevilla kulan ka tirsan copa del rey habeen dambe shan saac ciyaar ka dhici doonto garoonka sevilla ee Ramon Sanchez bisjuan.
Barcelona oo safar ah waxaa ciyaartaas seegi doonaan xidigo badan oo ay ka mid yihiin xidiga daafaca ka ciyaara ee Dest iyo Araujo dhaawac soo gaaray kulankii ugu dambeeyey ee Real betis sidoo kale waxaa maqnaan doonaan Pjanic, Brithwaite, Pique, Roberto iyo Ansu Fati.
Kooxda ka dhisan gobolka Catalonia ayaa damacsan in koobkaan ay ku xisaabtamaan madaama horyaalka spian hogaanka looga haayo dhibco badan sidoo kalena ay adag tahay xaalada tartanka uefa champions league.
Previous articleQalalaadkii De Gea kulankii Everton iyo Henderson oo ka Faa’iideysan Kara.
Next articleMark Hughes oo ku booriyay Manchester United inay heshiis cusub u gacan geliso Edinson Cavani